Aliran Langsung Osmosis Berbalik -
Aliran Langsung Osmosis Berbalik
[latabatra amazona = “2412” tracking_id = “osmosis.inv.optimo-21”]
Maninona no mividy fitaovana Direct Flow Reverse Osmosis?
Inona no atao hoe osmosis mivadika ary inona no ilana azy?
Inona no vokarin’ny osmosis mivadika?
Inona no vokarin’ny osmosis Flow Forward Flow?
Ohatra amin’ny osmosis mihodina
Reverse Osmosis Direct vidin’ny sivana ankehitriny
Scheme Osmosis mivadika
Aiza no hividianana ny rafitra sivana Direct Flow Reverse Osmosis?
Aiza no ahazoana kojakoja fanampiny ho an’ny Osmosis mivantana mivantana?
Fikojakojana ny rafitra osmosis mivadika Direct Flow
Ahoana ny fanangonana fitaovana osmosis mihodina mivantana?
Mamindra ny fametrahana paompy:
Fandraisana an-tanana ny fitaovana
Ny fitaovan’ny osmosis Direct Flow mivantana dia manana fari-pahaizana avo indrindra amin’ny calidae hahafahanao manivana tsara ny rano amin’ny fomba tsara sy azo antoka amin’ny karazana loto sy metaly mavesatra ary koa ny karazana bakteria rehetra.
Ny osmosis mivadika dia rafitra fanivanana rano izay miasa amin’ny alàlan’ny tsindry. Miaraka amin’ity herin’ny tsindry ity, ny rano dia entina amin’ny alàlan’ny membrane semi-permeable, avy amin’ny vahaolana tsy dia mifantoka amin’ny vahaolana masira kokoa mba hampifandanja ny fifantohany.
Direct Flow Reverse Osmosis System , ny singa fototra amin’ity singa ity dia ny membrane osmosis miverimberina 0,0001 izay manala tanteraka ny bakteria, metaly mavesatra, sira, akora mineraly manimba ary ireo fitaovana simba ao anaty rano.
Direct Flow Reverse Osmosis System Ny singa lehibe amin’ity singa ity dia ny membrane osmosis miverimberina 0,0001 izay manala tanteraka ny bakteria, metaly mavesatra, sira, akora mineraly manimba ary ireo fitaovana simba ao anaty rano.
Mariho fa amin’ny osmosis mifamadika dia ny rano ihany no mandalo ny membrane semi-permeable. Raha lazaina amin’ny teny hafa, ny rano ao amin’ny faritra misy fifantohana avo dia mitarika mankany amin’ny faritra ambany fifantohana. Raha sira ny fifantohana be, ohatra, ny ranomasina, rehefa ampiharina ny tsindry, dia miakatra mankamin’ny faran’ny membrane ny ranomasina.
Miovaova matetika ny vidiny eo amin’ny habe, ny fampiasana azy, ny karazana dingana, ny kalitao, ny fampiasana azy. Azonao atao ny mamantatra ireo vidiny samihafa azonay ao amin’ny magazay an-tserasera.
Ny sivana osiazy iversa anay dia mendrika ny hevitry ny matihanina tsara indrindra amin’ny sehatra noho ny famokarana sy ny faharetany.
Ny ekipan’ny osmosis dia manana fenitra faran’izay tsara kalitao, araka ny efa nolazainay teo aloha hanomezana anao ny vokatra tsara indrindra.
Ny fonontenanay dia vita amin’ny fonosana kalitao tsara indrindra hanomezana anao tolotra mahomby sy mahomby hiadiana amin’ny fahalotoana ary hikarakara ny fahasalamanao.
Azonao atao ny mividy ny sivana na amin’ny vavahadinay na amin’ny tranokala amazona.
Azonao atao ny mahazo ny faritra sanda ao amin’ny vavahadinay mivantana, na amin’ny tranokala amazona.
Tsotra ny fikojakojana, soloina fotsiny ny fonosana dia vita ianao. Raha mila karazana fanamboarana hafa ianao,
tokony manatona manam-pahaizana manokana ianao.
Akatona ny paompy amin’ny fantson-drano mangatsiaka
mamelona ny paompy ao an-dakozinao. Raha tsy izany dia akatona ny
fantson-drano ankapobeny ao an-tranonao.
Esory ny fantson-drano mangatsiaka.
Ampidiro ao anaty kit kitapo ny
fehezan-teny 3/8 ”, apetraho ireo gasket (Na dia tsara kokoa aza ny Teflon)
Avy eo ampifandraiso indray ny fantsom-pamokarana ho an’ny socket 3/8”
vao napetraka. Ampifandraiso amin’ny fantsom-
paompy ny faran’ny fantsona iray ary ny ilany iray amin’ny fidiran’ny rano amin’ny fitaovantsika (8)
Manaova lavaka 12mm ao anaty fitoeran-
drano, alao antoka fa azo idirana ny ambany
Ampidiro ny kofehy paompy miaraka amin’ny peratra
fitetezana chrome sy ny gasket famehezana amin’ny alàlan’ny tapany ambony amin’ny fitoeran’entana na
Eo amin’ny faran’ny kofehy dia ampifandraiso
amin’ireto filaharana manaraka ireto ny ampahany sisa tavela : mpanasa lamba, mpanasa lamba ary voanjo. Hamafino tsara ny
voanjo, mba hiantohana ny fanamafisana ny paompy eo amin’ny
Ampidiro ao amin’ny fifandraisana misy kofehy
vehivavy Chrome ny faran’ny fantsona iray, apetraho eo amin’ny faran’ny fantsona ny fiparitahan’ny plastika fotsy
ary ampidiro ao anaty fantsona ilay ampahany fotsy mahitsy. Raha vantany vao azontsika
izany, esory amin’ny kofehy ambany amin’ny paompy izy io, hahazoana antoka fa
tery. Avy eo ampifandraiso amin’ny
sisin’ny sisin-dàlana sivana (FAUCET) ny faran’ny iray hafa .
Fifandraisana amin’ny tatatra: ampirisihina hametraka ny vozon’akanjoko aorian’ny
sink siphon mba hisorohana ny tabataba amin’ny fandavana rano,
na dia azo apetraka eo aloha aza izy io.
Borohy ny lavaka 6mm, ampifanaraho amin’ny voaroy ny voanjo.
Ampifandraiso fantsom-pohy ho an’ny tatatra ary ny faran’ny lafiny hafa amin’ny famerana
Fifandraisana tanky fitehirizana: Aza manodinkodina ny rivotra ao anaty
tanky. Raiso ny valizy plastika (tantana
manga) avy amin’ny kitapo fametrahana ary atsofohy amin’ny tanky fanangonana.
Mba hiantohana ny fihenjanana dia ampiasao ny teflon (fa tsy kofehy)
ho an’ny kofehin-tanky ary hamafiso ny tanana raha tsy atao be loatra.
Aorian’izay, ampifandraiso ny fantsona iray hafa izay mampifandray ny tanky amin’ny
faran’ny hafa an’ny sivana (TANK).
• Hamarino raha azo antoka sy
tery ny fifandraisana rehetra .
• Esory ny fantsona izay mivoaka avy amin’ny fantsona sivana fahatelo mankany amin’ny
valizy 4-lalana, ento any anaty siny na tatatra.
• Vohay miadana ny paompy amin’ny fantson-drano dia ho hitanao ny fomba
manomboka mivoaka ny rano mainty avy amin’ny fantsona izay vao
nifandray. Raha vantany vao mijanona ny black (vovoka karbaona
mihetsika) (mety tsy hivoaka izy), akatona ny
seranan-tsofina ary ampifandraiso amin’ny fantsom-by efatra ny fantsona.
• sokafy indray ny valizy miditra ary avelao hiasa mandritra ny adiny 4 ny fitaovana. Rehefa
afaka adiny 4 dia
alao tanteraka ny tanky (mety hivoaka ny rano mainty, be rahona na fotsy, mahazatra io).
• Avereno in-2-4 ity hetsika ity mandra-pivoakan’ny rano
madio (haverina isaky ny fanovana sivana ity fomba ity).
• Manomboka izao dia afaka mandray ny ranonao osmotic ianao.
• Ny tanky ao amin’ny fitaovana dia efa feno rivotra
(0,5kg), tsy mila manova azy ianao raha tsy mahazo ny
jeneraly osmosis mihodina
Osmosis miverimberina 7
Osmosis miverina amin’ny dingana 6
leroy osmosis mihodina
reverse osmosis pro genius